अन्ततः माधव नेपालले साथ दिएपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्री – Sandesh Press
May 14, 2021 293
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमतका सरकार निर्माणका लागि दिएको समय सकिएको छ।
बहुमतको सरकार गठन गर्ने समय सकिएसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको रुपमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्दै छन्। उनले एक महिनाभित्र संसदमा बहुमत सावित गर्नुपर्ने छ।
राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र कांग्रेस-माओवादीले दावी नगरपछि एमालेले पनि दावी नगर्ने भएको हुँदा ओलीलाई पुनः यो मौका मिलेको हो । महन्थ ठाकुर पक्षसँग तटस्थ रहने बाहेक बहुमतको सरकार दावी गर्ने कुनै कुरा नभएकोले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकार बन्ने भएको हो ।
माधव नेपाल समूहले सामुहिक राजीनामा नगरेको र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुलाई भक्तपुरको रिसोर्टमा राखिएपछि देउवाको पक्षमा बहुमत नजुटेको हो ।
विपक्षीले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले अब संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुलेको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुले बहुमत सिद्ध गर्न नसके ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइने संविधानको धारा ७६ (३) मा प्रावधान छ ।
यसबीचमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नाम पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चामा आएको थियो । काँग्रेस, माओवादीका नेताहरुले महन्थको नाम अगाडि सारेको अवस्थामा चाहिँ बहुमत जुट्न सक्ने सम्भावना पनि थियो । तर, यसका लागि काँग्रेस–माओवादीका नेताहरु तयार भएनन् ।
Prevआइसियु नपाएर बुहारीको निधन भएपछि नारायणकाजीले आक्रोश पोख्दै भने, जनता ‘मारेर कसरी बस्‍न सकेको नालायक सरकार ?
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, बैशाख ३१ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
सबैका भगवान् पत्रकारिताको धरोहर रबि लामिछानेका यी राम्राराम्रा टिकटकहरु (हेर्नुस् भिडियो )
गायिका टिका सानु र रबिन लामिछानेले गरे धुमधाम संग बिहे, गरे वैवााहिक जिवनको सुरुवात (हेर्नुस भिडियो)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्याल (10353)
अन्तत प्रियंकाले दिइन् छोरीलाई जन्म? (10220)
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (6040)
भर्खरै सम्पूर्ण काठमाडौंबासीका लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर। (5859)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (5643)
सं’ क्रमित शिवहरि पौड्यालको स्वास्थ्य वि’ग्रिए पछि आ’ इसियुमा राखेर उ’ पचार सुरु (3182)
अब खाना पकाउने ग्यास ११२० रुपैयाँमै पाइने! (3113)
दुबई काण्ड: यी नेपाली युवतीको हेर्नै नसकिने भिडियो संसारभर भाइरल, आखिर किन यस्तो छाडा, रहर कि बाध्यता? (भिडियो सहित) (2341)
केएमसी अस्पतालमा एकदिनको अन्तरालमै दम्पतिको मृत्यु, ६ वर्षीया छोरीको भावुक सन्देश! (2140)
बिवाह हुनु भन्दा ७ दिन पहिले दुलाह मृत्यु मुखमा पुगेपछि दुलहीले छोडिनन बरु ७ महिना सेवा गरेर उनलाई निको पारेर बिवाह गरिन (भिडियो सहित)
भोलिदेखि विद्यालय अनिश्चितकाललाई बन्द !!
पछिल्लो २४ घण्टामा ३१५ संक्रमित थपिदा ६ जनाले गुमाए ज्यान
डिभोर्सपछी, निखिल उप्रेतीले दिए श्रीमतीलाई यो ४ तले घर र ५० लाख रूपियाँ